Madaxweyne Farmaajo oo u safray Masar si uu uga qeybgalo shirka Midowga Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo u safray Masar si uu uga qeybgalo shirka Midowga Afrika
April 22, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Talaado ah u safray dalka Masar.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay Villa Soomaaliya, madaxweynaha ayaa halkaas uga qeybgali doona shir deg-deg ah oo ay yeelan doonaan madaxda Midowga Afrika.
Shirkaas ayaa looga hadli doonaa xaalada dalka Suudaan iyo sidii xal looga gaari lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jirta dalkaas.
Horaantii bishaan, madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Al-Bashiir ayaa xilkii waxaa ka qaaday ciidamada milatariga kadib ku dhawaad 30 sanno oo uu awooda heystay.
Tilaabada ayaa ka dhalatay kadib banaanbaxyo looga soo horjeeday Al-Bashiir oo muddo bilo ah ka soconayay Suudaan.